Keenyaan Fiigicha Qaxxaamura Addunyaa Ugaandaatti Madaaliyaa 14 Moote,ta Denmarkillee Atileetota Hedduu Qopheeffatte
Bitootessa 17, 2014
WASHINGTON,DC — Dorgommiin km 20-21 waldaan IAAF qopheesse sadeessee haga guddaan Keenyaa moote tana atileeota biyya hedduutti itti walti dhufee dorgome.Keenyaan dorgommii km 6-12 tana dhiiraa fi dhalaalleen mootee badhaafamtee, Ugaandaan ammoo madaaliyaa tokkollee hin arganne.
Akka leenjisaan atileetota Keenyaa fuudhee dorgommiin dhaqe Girigoorii Kolandoo jedhutti jabaatanii leenjisaan akkuma diqqaatti moo’an.
Gama kaaiin ammoo atileetotii biyya hedduu dorgommi Bitootessa 29,2014tti Kopenhengen, Denmaarkitti dorgomaniif qophii jirti. Keenyaan atileetota hedduu qopheeffaate. Amerikaalleen atileetota 10 qopheeffattee, Itoophiyaan akkanuma atileetota dorgommii tanaa ergatti.
Addunyaan dorgommii fardoo qolchaa itti wal dorgomsiisaan ta Bitootessa 29,2014-Dubaahiitti jalqabaniif qophii jirti. Dorgommii teettoon fardaa bebeekamoon itti walti dhufan tana tun karaa dhoqqee km lamaa keessaa fardoo gussaa wal qolchisiisan.
Dubaahiilleen wal dorgommii fardoo addunyaa ta abbaa moohatee waancaa fi horii guddaa kennaniifitti qophii jirti.Fardoon akkanaa yoo hedduu ganna 3-5 fa.Dorgommii akkanaa yoo hedduu Amerikaatti moo’a.Ganna dabrellee farda Amerikaa dhaaba Animal Kingdom keessaa dhufe ka ganna 5tti moo’e.
Atileetiin Itoophiyaa Alemitu Heroyetti dorgommii km 6tti lammeessoo,Alem Beqqelee ammoo km 8tti 5essoo,atileetiin Eertiraa Birhaanee Afeworqi ammoo km 8 bahe. Naannoleen Itoophiyaalleen dorgommii Guutuu Itoophiyaa magaalaa Baahir Daaritti jalqaanitti dorgomuutti jiran.Oromiyaan dorgommii tanaf atileetota hedduu ergattee haga guddaan moohachuuf abdii qabdi.
Atileetiin Amerikaa Kendel Williamsillee Chaampiyoonaa mana keessaa NCAA Amerikaa kutaa New Meksikootti qopheessite rekordii haaraan moote.Intaltii ganna 19 ta university Joorjiyaa baratttu tun ulee dagalee hedduu haga metirii 60 dheeressanii naqan nama cufa caaltee kuruphattee kuttee rekordii haaraan moote.
Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ingiliiz English Premiere League dorgommii ta eegii jalqabanii torbaan 30essoo keessa jriani Bitootessa 15,qofatti goolii 20 gale. Dorogmmii Bitotootessa 16-tti ammoo Arsenal Tottenham 1-0 moote.Goolii Arsenal Tottenhaamiin moote tana Thoomaas Roskiskiitti daqiiqaa 72-ti keessa buuseef.
Dorgommii Bioteessa 22-tti ammoo Chelsiin Arsenal waliin Manchester Sitiin Fuul Haam waliin,Kiristaal Sitiin Niiwu Kaastile waliin taphachaa walumattu tapha 20 taphatan.Akka amma jirutti Chelsiitti qabxi guddoon dura jira.